Banyere Anyị - Huaian Huafu Special Nkedo naịlọn Co., Ltd.
Huaian Huafu Special Nkedo Naịlọn Co., ltd, guzosie ike na 2007, nke dị na huai'an obodo, n'obodo nke mbụ Premiya nke China, zhou en lai na-pụrụ iche na-amị dị iche iche naịlọn ngwaahịa gụnyere pole, mmịfe, Gear, ala, aka uwe , mbuli pole, eriri eriri na ụdị ihe ọ bụla pụrụ iche naịlọn.
Huafu na emeputa ihe nkpuru nylon di iche iche tinyere nylon pulleys ， ndu nylon, nylon gear, nylon gasket, nylon bar, nylon slider, nylon roller na iche iche naịlọn dị iche iche. N'ime ihe karịrị afọ iri nke mmepe, Huafu amalitela ịbụ otu n'ime ndị na-eweta ngwaahịa ngwaahịa nylon nwere ihe karịrị otu narị ndị ọrụ gụnyere ndị injinia iri na asatọ na ihe nrụpụta kwa afọ nke nde US dollar iri.
Ihe anyị nwere ike ịnye
◉: Kasị asọmpi price
◉: Ntinye ngwa ngwa ọzọ
◉: Tozuru oke mma Chọpụta usoro
◉: Ngwaahịa naịlọn ahaziri iche
◉: 24 awa njikere ọrụ
◉: ọkachamara oru otu
Ọchịchọ nke ngwaahịa Naịlọn na-abawanye nke ukwuu Dịka mmepe nke akụ na ụba ụwa maka iri afọ ndị na-adịbeghị anya. Ngwaahịa Naịlọn, Dịka ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na klọb ngwaahịa klọb, ejirila ọtụtụ ebe na injinia maka uru ya.
Ejirila igwe naịlọn na igwe mbuli maka obere mkpọtụ ya, mmanu onwe ya, nchedo waya na ịgbatị ndụ ọrụ nke akụrụngwa niile.
Ọzọkwa naịlọn ngwaahịa na-etinyere na kreenu dị ka pole, eriri guider iji belata esemokwu na belata dum arọ nke ígwè, na naịlọn-etinyere igwe nwekwara ike-eji na mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ebe iru mmiri na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi ugboro ugboro ime.
Tower crane na-arụ ọrụ dị mkpa na iwu obodo, na ezigbo ụlọ na-ekpuchi 10% nke akụ na ụba ụwa. Ngwongwo Naịlọn bụ akụkụ a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na usoro mmepụta kreenu ụlọ elu ma nwee ike ịnwe ikike dịka otu ngwongwo.
Tụnyere metal gasket, naịlọn gasket nwere magburu onwe mkpuchi, corrosion eguzogide, okpomọkụ mkpuchi, na-abụghị magnetik Njirimara, Mkpa ọkụ arọ. Ya mere, a na-eji ya na semiconductor, ụgbọala, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụgbọ elu, ime ụlọ mma na mpaghara ndị ọzọ metụtara ya.
Karịsịa, ka oge na-aga, a ga-emepụta ọtụtụ ngwaahịa nylon ma tinye ya n'ọrụ n'ọtụtụ ebe. Maka ezi uru ya, akụkụ naịlọn ji nwayọọ nwayọọ dochie akụkụ igwe. Ma nke a bụ omume ma baakwa uru na mmepe gburugburu. Hoped ahịa anyị nwere ike ịkpọtụrụ anyị, Huafu Nylon`to izute gị chọrọ nke naịlọn ngwaahịa. Ọnụ anyị na-saa mbara anyị azụmahịa, guzosie ike imekọ ihe ọnụ mmekọrịta.